Uganda Rakaabka Imanaya Hadda Waa Xor Si Ay U Socdaan Imtixaanka Kadib
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Uganda War Deg Deg Ah » Uganda Rakaabka Imanaya Hadda Waa Xor Si Ay U Socdaan Imtixaanka Kadib
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Uganda War Deg Deg Ah
Ugaandha oo imanaya rakaab
Ka dib cadaadis ka yimid dadka safarka ah iyo baraha bulshada, Wasaaradda Caafimaadka Uganda ayaa lagu qasbay in ay liqdo xoogaa pie ah oo ay u foorarsato cadaadiska hawlwadeennada dalxiiska iyo dadweynaha safarka ah oo ay u oggolaato rakaabka imanaya inay u sii socdaan meelaha ay u socdaan ka dib markii la tijaabiyey COVID-19 PCR imaanshaha.
Tani waxay ka dambeysay ka dib markii dardaarankii bilowga ahaa ee qasabka ahaa ee looga baahnaa rakaabka inay sugaan natiijadooda marka ay yimaadaan garoonka diyaaradaha ay la kulantay bilow xun.
Dhowr qof oo safar ah ayaa ku wadaagay muuqaalo ku saabsan dhibaatadii ay soo mareen WhatsApp, twitter, facebook, iyo aaladaha kale ee baraha bulshada kadib markii ay saacado ku sugayeen garoonka.
Waxay ceeb ku ahayd warshaddii u halgamaysay dib u dhiska ka dib ku dhawaad ​​2 sano.
Si loo badbaadiyo wejiga, markii labaad muddo toddobaad gudihiis ah, waxaa la soo saaray awaamiir ka wakiil ah Dowladda Uganda. Midkan labaad, oo loo tixraacayo S23/21 COVID-19 Tallaabooyinka caafimaadka ee Madaarka Caalamiga ah ee Entebbe oo ka yimid Xafiiska Warfaafinta Hawada ee Maamulka Duulista Rayidka ee Entebbe, ayaa ka sarreeya. dardaarankii hore ee SUP 22/21. Isbeddelkan ayaa dhaqan galaya maanta oo ah 5-ta Noofambar.
Awaamiirta cusub ayaa sheegaysa:
1. Dhammaan rakaabka imanaya garoonka caalamiga ah ee Entebbe, iyadoon loo eegin waddanka ay ka yimaadeen ama xaaladda tallaalka, waxay mari doonaan baaritaan COVID-19 oo khasab ah.
2. Si ay u sahlanaato, dhammaan rakaabka ka soo degaya garoonka caalamiga ah ee Entebbe waxaa laga qaadi doonaa muunadooda COVID-19 waxaana loo oggolaan doonaa inay u sii gudbaan guryahooda ama hoteeladooda si ay gooni-gooni ugu helaan ilaa ay ka helayaan natiijooyinkooda.
3. Natiijooyinka imtixaanka waxaa loo diri doonaa telefoonadooda/imaylkooda.
4. Ka-dhaafitaannada kaliya waa:
– Carruurta ka yar 6 sano.
- Shaqaalaha diyaaradda oo wata caddaynta tallaalka COVID-19 oo buuxa.
5. Rakaabkii laga helay cudurka waxa daba gal ku samayn doona kooxda Dabagalka ee Wasaaradda Caafimaadka.
6. Daawaynta rakaabka (5) ee kor ku xusan waxay raacaysaa habraaca daawaynta ee Wasaaradda Caafimaadka ee COVID-19.
7. Haddii qof rakaab ah lagu arko imaatinka calaamado muujinaya caabuqa COVID-19, isaga/iyada waa la karantiilay waxaana la geynayaa xarunta daawaynta ee dawladda.
8. Si habsami leh loogu fududeeyo madaarka caalamiga ah ee Entebbe, dhammaan rakaabka soo galaya waxa qasab ah inay:
- buuxiyo foomka Ilaalinta Caafimaadka ee khadka tooska ah 24 saacadood ka hor imaatinka.
- ku bixi US$30 online 24 saacadood ka hor imaatinka.
9. Dhammaan rakaabka imanaya waxa looga baahan yahay inay u soo bandhigaan Caafimaadka Dekedda ee Madaarka, shahaado baadhista PCR ee COVID-19 diidmada ah ee baadhista la qaaday 72 saacadood gudahood laga bilaabo wakhtiga muunadda la qaaday.
10. Dhammaan rakaabka dhoofaya waxaa looga baahan yahay inay u soo bandhigaan Caafimaadka Dekadda Madaarka, shahaadada PCR-ga xun ee COVID-19 ee baaritaanka lagu sameeyay 72 saacadood gudahooda laga bilaabo wakhtiga muunada la qaadayo ilaa la fuulo. Waxay u hoggaansami doonaan shuruudaha safarka caafimaad ee waddankooda.
11. Rakaabka imaanaya xilliga bandowga, iyo/ama ka imaanaya degmooyinka ka baxsan Kampala ee wata tigidh diyaaradeed iyo kaar lagu fuuli karo, waa in loo oggolaadaa inay u sii gudbaan hoteeladooda iyo/ama hoygooda.
12. Rakaabka ka dhoofaya xilliga bandowga, iyo/ama ka imaanaya degmooyinka ka baxsan Kampala ee wata tigidh diyaaradeed oo sax ah, waa in loo oggolaadaa inay u sii gudbaan garoonka ay ku socdaan iyadoo la horgeynayo tigidhka rakaabka ee maamulka si ay u caddeeyaan inay aadaan garoonka.
13. Darawaliintu waa in ay hayaan caddaymo muujinaya in ay ka yimaadeen garoonka (sida tigidhka baarkinka madaarka ama tigidhka rakaabka) si ay u dejiyaan ama u soo qaadaan rakaabka.
14. Gaadiidka hawada ee hadhaaga dadka waa la ogolyahay in dalka la geeyo hadii la buuxiyo shuruudahan soo socda.
– Shahaadada Caafimaad ee Sababta dhimashada.
- Warbixinta dhimashada ka dib ama Warbixinta Caafimaad ee Dhameystiran ee ka timid dhakhtarka/xarunta caafimaadka.
- Shahaadada mayrid (oo ay ku jirto shahaado duugista ee dhimashada COVID-19 awgeed).
– Nuqulka baasaboorka/dokumentiga aqoonsiga qofka dhintay. (Baasaboorkii asalka ahaa/dokumentiga safarka/dhokumentiga aqoonsiga ee la horgeynayo madaxda socdaalka).
- Ruqsad ka soo dejin/ogolaansho soo dejin ka timid Agaasimaha Guud ee Adeegyada Caafimaadka.
- Baakadaha ku habboon - lagu duudduubay bac aan biyuhu lahayn ka dibna la geliyaa naxashka zinc leed iyo bir dibadda ah ama sanduuq alwaax ah.
- Dukumeentiga waxaa lagu xaqiijin doonaa caafimaadka dekeddu, sanduuqa marka la yimaadona waa in laga nadiifiyaa caafimaadka dekeddu.
- Aaska meydadka dhibanayaasha COVID-19 waxaa la fulin doonaa iyadoo la raacayo habraacyada jira ee aaska sayniska.
15. Si dalka loo keeno hadhaaga dadka, waa in caddaynta laga helo wasaaradaha caafimaadka iyo arrimaha dibadda.
ETurboNews la aasaasay in amarka Hay'adda Duulista Rayidka (CAA) hadda lagu wargeliyay talooyinka saynisyahano ka socda Guud ahaan, Adeegyada Caafimaadka, iyo Wasaaradda Caafimaadka oo uu madax u yahay Agaasimaha Dr. Henry G. Mwebesa.
Hawl-wadeennada Dalxiiska ayaa ka shakiyey Wasaaradda Caafimaadka oo ka gaabsanaysa Imtixaanka qasabka ah ee imaanshaha, iyada oo Wasaaraddu ku adkaysanayso in la joojiyo faafitaanka noocyada kala duwan ee COVID-19.
Maalintii ku xigtay dardaarankii hore shir jaraa'id oo ay 27-kii Oktoobar ku qabatay garoonka diyaaradaha ee Entebbe, Wasiirka Caafimaadka Mudane, Jane Ruth Achieng, waxay go'aansatay inay sii waddo habka tijaabada ah ee bilowga ah inkastoo ay la kulantay caqabado ay la kulantay shirka jaraa'id, sida. makarafoonada fashilantay, roob da'aya, iyo cidhiidhi, in yar oo aan xuso.
Ku qanacsanayn la'aanta in la sugo imtixaanka ka dib, ayaa soo jiidatay dareenka sharci-dejiyaha Guddiga Dalxiiska ee Baarlamaanka oo u yeeray mas'uuliyiinta waaxda dalxiiska si ay ugu biiraan Wasaaradda Caafimaadka (MOH), Hay'adda Duulista Rayidka ee Uganda (UCAA), iyo daneeyayaasha kale ee ku lug leh hirgalinta imtixaanada qasabka ah ee imaanshaha, si ay ula falgalaan guddiga caafimaadka ee baarlamaanka oo uu hogaaminayo gudoomiye ku xigeenka, Hon. Ssebikaali Yoweri, November 4, 2021, ka dib waxay kormeer ku tageen qaybaha ka jira garoonka caalamiga ah ee Entebbe.
Wakiilo ka socday waaxda dalxiiska ayaa kala ahaa Amos Wekesa oo ka tirsan Harooyinka Weyn ee Safaris iyo Civy Tumisime, oo ah Guddoomiyaha Ururka Hawl-wadeennada Dalxiiska Uganda (AUTO). Wekesa ayaa ka warbixisay baajinta macaamiisha aan dooneynin inay maraan imtixaanno aan loo baahnayn iyo dib u dhac halka Tumusime uu ka codsaday dalxiisayaasha la tallaalay imtixaannada PCR (Polymerase Chain Reaction) ee diidmada ah 72 saacadood ka hor imaatinka si loogu oggolaado inay u sii socdaan meelaha ay u socdaan iyagoon tijaabin markay yimaadaan.
Si ay ugu gurmadaan iyo guud ahaan ganacsiga dalxiiska, Achieng iyo Wasaaradda Caafimaadka ayaa u guntaday cadaadiska.
Xidhiidhka ka dhexeeya wasaaradda caafimaadka iyo hawl-wadeennada dalxiisku waxa uu ahaa mid is-khilaafsan tan iyo markii ay qaybo ka mid ah hawl-wadeennada dalxiisku is-weydiyeen sababta keentay in imtixaannadaas lagu tijaabiyo oo kaliya garoonka diyaaradaha ee aan lagu samayn goobaha kale ee laga soo galo. Dalxiisayaasha ayaa ku eedeeyay waaxda caafimaadka inay macaash doon tahay oo qarashka ku baxaya dalxiiska. Dhanka kale, waaxda caafimaadka ayaa ka careysiisay hawl-wadeennada dalxiiska, iyaga oo meesha ka saaray in ay faragelin ku hayaan shaqadooda.
Wareysi telefishan ah oo laga sii daayay NTV oo raacay dardaaranka, Maamulaha Arimaha Dadweynaha ee UCAA Vianney Lugya ayaa qirtay cadaadiska socda. Waxaanu yidhi “Laga soo bilaabo saqdii dhexe ee xalay ilaa iyo intii aanu bilownay fulinta go’aankaas, dhammaan rakaabka waa loo ogol yahay inay sii wataan marka muunadkooda la soo qaado, waxaanay soo mareen qaabkii socdaalka iyo imaanshaha. Waxaan ku bilownay diyaarada Ethiopian Airlines saqdii dhexe kadib; Waxa kale oo noo soo galay Rwandair iyo sidoo kale Egypt Air. Saaka waxa aanu filaynaa diyaarada Uganda Airlines, Kenya Airways, iyo duulimaadyo kale oo dhawr ah, waxaanay tani nafis weyn u tahay garoonka iyo gaadiidka cirkaba”.
Marka la eego walaacyada ku saabsan raadinta, wuxuu sheegay in shaqaalaha caafimaadka ee garoonka diyaaradaha ay ilaa hadda tijaabiyeen 11,449 rakaab ah 43 ka mid ahna ay noqdeen togan.
"Markaad eegto sawirka weyn marka la eego waxa dhacaya, rakaabku way yimaadaan, muunad ayaa laga soo qaadayaa, oo ... waxay sugayaan natiijada qiyaastii 2 1/2 saacadood. Tusaale u soo qaado qof ka soo duulay US – socdaal ku dhow 20 saacadood, oo uu ku jiro safar. Taasi waa isha cabashooyinka qaarkood. Markaa qof hore u daalan, waa la sugi karaa. Waxa jira dhawr qof oo arrintan khuseeyo. Waxaan si dhow ula shaqeyneynaa amniga, bangiyada, NITA (Maamulka Tignoolajiyada Qaranka) iyo kuwa kale.
“Waan qiimeynay xaalada, runtiina waan siinay taladan. Waxaan ku siin karaa tusaale Dubai oo laguu ogolaado inaad tagto hudheelkaaga ka dib marka muunad laga soo qaado. Waxaan aaday halkaas dhowr toddobaad ka hor, isla markii aan gaaray hotelka, waxaan helay natiijada.
"Waxaan helnay jawaab celin iyadoo rakaabku ay ka cabanayeen in la sugo, tani waxay niyad-jabisay rakaabka qaarkood inay safraan. Calaamadaha horumarka tan iyo markii uu amarku hirgalay waxa ay markhaati ka ahaayeen hab-socod habsami leh oo ay la socdeen hawl-wadeennada dalxiiska qaarkood, iyaga oo ku hadlaya xaalad aan la magacaabin, iyaga oo ka warbixinaya macaamiishooda in ka yar 20 daqiiqo si ay u nadiifiyaan nidaamka una sii wadaan.
Dalxiisayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa buug online si aad u tijaabiso mudnaanta halkan.